Warshada ridaya dhinta, qeybiyeyaasha - Soo -saareyaasha shubka Shiinaha ee dhinta
Dhimashada shubistu waa geedi socod shubka biraha ah, kaas oo lagu garto iyadoo la isticmaalayo daloolka hoose ee dhinta si loo saaro cadaadis sare biraha la shubay. Caaryada waxaa sida caadiga ah laga sameeyaa alloys xoog sare leh, taas oo xoogaa la mid ah wax -ka -durinta duritaanka. Inta badan shubka dhimashadu waa bilaa bir, sida zinc, copper, aluminium, magnesium, lead, daasadda iyo macdanta macdanta macdanta iyo alahooda. Iyada oo ku xidhan nooca shubay dhiman, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo qolka qabow mashiinka shubay dhinta ama qolka kulul mashiinka shubay dhiman T ...
Adeegyada taageeraya alaabada biraha ee shubka dhimanaya
Faa'iidooyinka kabka shubista waxaa ka mid ah saxnaanta cabbir fiican. Sida caadiga ah, tani waxay ku xiran tahay maaddada shubka. Qiimaha caadiga ah ayaa ah in khaladku yahay 0.1mm cabbirka 2.5cm ee ugu horreeya, khaladkuna wuxuu ku kordhaa 0.002 mm mid kasta oo dheeri ah 1cm. Marka la barbardhigo hababka kale ee kabka, dusha ka shubistu waa mid siman, oo raadiyuhu waa qiyaastii 1-2.5 microns. Kaabadaha leh dhumucdiis gidaar qiyaastii 0.75 mm ayaa la soo saari karaa marka loo eego sanduuqa sanduuqa ama shubka dhimashadda joogtada ah. Waxay si toos ah u ...
Adeeg hal joogsi ah oo shubka dhimashadiisa ah
Kala soocidda mashiinnada shubka dhimanaya Qolka kulul mashiinka shubka dhinta: daawaha zinc, daawaha magnesium, iwm; Qolka qabow dhinto mashiinka shubay: daawaha zinc, daawaha magnesium, daawaha aluminium, daawaha copper, iwm; Mashiinka shubka tooska ah ee dhinta: zinc, aluminium, naxaas, rasaas, daasad  Farqiga u dhexeeya qolka kulul iyo qolka qabow waa haddii nidaamka duritaanka ee mashiinka shubka dhimashadu uu ku dhex milmay xal bir ah. Mashiinnada shubka ee dhinta ayaa sidoo kale loo qaybin karaa jiif iyo toosan. Dhibaatada guud P ...
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Guga Saxanka, Aluminium CNC Qaybo Machined, Sheet Birta Stamping Products, Boolal, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Dhimashada Magnesium, Dhammaan Alaabta